Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Guddiyada, Guddiyada iyo Golayaasha|Golayaasha hoylaawayaasha ah
Golaha La-talinta ee Gobolka Washington ee Guri la'aanta (SACH) iyo Golaha Dhex-galka Guryaha La'aanta (ICH) waxay kulmaan saddexdii biloodba mar si ay ula shaqeeyaan oo u wargeliyaan siyaasadda gobolka si loo joojiyo hoy la'aanta.
SACH waa gole la magacaabay oo lataliye ah. Waxaa abuuray Amarka Fulinta sanadkii 1994 oo dib loo eegay sanadkii 2015. Codsiyada magacaabista golayaasha ama guddiyada waxay noqon karaan halkan laga helay.
Xubnaha ICH waa wakiilo wakaalad dawladeed oo ay magacaabaan agaasimayaasha wakaaladda. ICH waxaa la abuuray 2006 qaab sharci ah RCW 43.185C.180.
Email Kathy Kinard ugu dir kathy.kinard@commerce.wa.gov wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kulanka dib loo eegay ee loo qorsheeyay 2021.
SACH / ICH Dukumiintiga Kulanka
Golaha La-talinta Gobolka ee ku saabsan hoy la'aanta
Maxaa kugu kalifay inaad codsato SACH?
Shakhsi ahaan waxaan dareemay hoy la'aan dhalinyaro ahaan, waxaan leeyahay khibrad gaar ah oo isticmaalaya shabaqadaha badbaadada bulshada iyo taageerada bulshada sidii guga si aan u noqdo xubin wax soo saar leh oo bulshada ah. Had iyo jeer waxay ahayd hadafkeygu inaan u adeego bulshadeyda anigoo gacan ka geysanaya yareynta tirada dadka aan haysan meel looga waco guriga. Aniga oo ah milkiile shirkad dhisme, shirkad soo saare cunto, iyo turxaan bixiyaha beeraha, aragtidayda waxaa qaabeeyay rabitaanka mideynta ganacsiyada adduunka, adeegyada bulshada, bulshada maxalliga ah, iyo dowladda si wax looga qabto dhibaatooyinka ka jira horumarinta xalalka waara ee mustaqbalka. sababo badan oo adag oo ka dambeeya hoy la'aanta.
Maxay yihiin rajooyinkaaga iyo himilooyinkaagu?
Ujeeddadayda ereygan waa inaan u adeego SACH iyo bulshada hoylaaweyaasha ah anigoo ka caawinaya talooyinka farsamada iyo iskaashiga joogtada ah ee keena natiijooyinka dhabta ah ee dhabta ah ee dhulka u dhiga heerka guri la'aanta ee Gobolka Washington. Dhibaatooyinka iyo sababaha kala duwan ee dadka u kaxeynaya hoy la'aanta saameyn wanaagsan ayey ku yeelan kartaa haddii rabitaanka dadka taageeraya dadaalka uu diiradda saaro bini'aadannimada arrinta kana shaqeeyo xalka naxariista leh.
Jesse GreeneMadaxweynaha, Seattle Popcorn Company, Inc., oo sameeya daroogada 'Uncle Woody's Popcorn'
Waxaan ka shaqeeyaa SACH oo mataleysa Waaxda Ganacsiga iyada oo qayb ka ah doorka aan ku leeyahay maareynta Kaalmada Guriyeynta ee Waaxda. Wax ka qabashada guryaha la awoodi karo iyo guri la'aanta ayaa udub dhexaad u ah himilada Waaxda ee xoojinta bulshada, iyo SACH waa kooxda koowaad ee la talinta ee hagta siyaasada guryaha ee hoy la'aanta ee wakaaladda.
Nidaamka ka jawaab celinta dhibaatada hoy la aanta ah ee Washington waligiis sifiican ugama uusan fahmin sida ugu haboon ee loo soo afjaro hoy la'aanta dahsoon iyada oo la adeegsanayo aalado hodanka ku ah sanado badan oo cilmi baaris ah. Hadafkeyga SACH waa in ay door muhiim ah ka ciyaarto farsamaynta iyo dhiirrigelinta isbeddelada siyaasadda, isdhexgalka nidaamka, iyo kheyraadka lagama maarmaanka u ah abuuritaanka dowlad aan qofna looga tegeynin dibedda.
Tedd KelleherMaamulaha Agaasimaha, Qeybta Caawinta Guriyeynta - Waaxda Ganacsiga
Waxaan sameeyay xirfad u doodista kuwa cod u baahan. Sharaf ayey ii tahay inaan u adeego SACH oo aan wakiil ka noqdo ganacsiga gaarka loo leeyahay maadaama aan u doodno qaar ka mid ah deriskeenna ugu nugul una soo jeedino talo-bixinno siyaasadeed oo ku saabsan siyaabaha lagu xoojinayo awoodda gobolka ee ka jawaab celinta baahiyaha dadka la soo deristay hoy la'aanta. Anigoo ah dacwad ooge hore, waxaan goobjoog u ahaa saameynta ba'an ee ay hoy la'aantu ku yeelan karto iyo baahida loo qabo siyaasado wax ku ool ah oo wax ka qabta arrimaha cakiran ee keena hoy la'aanta. Waxaan rumeysanahay in bulshooyinkeennu ay wanaagsanaadaan markaan dhammaanteen wanaag sameyno, iyo soo saarista xalal wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo lagula dagaallamo hoy la'aanta iyo looga hortago dadka inay la kulmaan hoy la'aanta ayaa ah muhiimadda koowaad ee horseedday ka qayb qaadashadayda SACH.
Waxaan rajaynayaa in aan iskaashi la yeesho Golaha si loo soo saaro talo bixinno siyaasadeed oo saameyn waara ku yeelan doona wax ka qabashada dhibaatada hoy la'aanta. Xallinta dhibaatooyinka ka jira hoy la'aantu waa mid ka mid ah caqabadaha noo waaweyn, ujeeddadayduna waa inaan xoojiyo jawaabta gobolkeenna ee ku aaddan baahiyaha dadka la soo deristay hoy la'aanta iyo in la taageero kuwa halista ugu jira inay hoylaawe noqdaan. Habka ugu horreeya ee guriyeynta, waxaan sameyn karnaa isbeddel.
Jason RittereiserQareen - Qareenada Shaqaalaynta HKM LLP
Waxaan codsaday SACH inay kaqeyb gasho shaqada weyn ee gobolka ee kahortaga iyo joojinta hoy la'aanta. Dhibaatada hadda jirta ee ina soo foodsaartay waxay u baahan tahay in dhammaan qaybaha ay isu yimaadaan si ay isugu duwdaan xalka. Waxaan keenay aragtida maalgeliyaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeynaya joojinta hoy la'aanta waxaanan rajaynayaa in aan muujiyo xalalka ka faa'iideysanaya waaxda dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay si loo abuuro waqti dheer, jawaabo wax ku ool ah u leh baahiyaha dadka la soo deristay hoy la'aanta.
Waxaan rajeynayaa in aan balaariyo isku xirka udhaxeeya samafalka gaarka ah iyo dadaallada dowlad goboleedkeena, sidaa darteed waxaan hubin karnaa in qofkasta oo ka mid ah gobolkeena uu helo meel aamin ah oo gurigiisa loogu yeero.
Shelia Babb AndersonMaareeyaha Barnaamijka Guri la'aanta, Sanduuqa U-doodista Xerada
Ka qeyb qaadashada horumarinta xalalka fekerka leh ee dhameystiran si loogu adeego dadka hoy la'aanta ah ayaa muhiim ah. Markii hore, waxaan u shaqeeyay Khabiir ku takhasusay Kheyraadka Guriyeynta ee barnaamijyada hoy la'aanta ah ee McKinney-Vento, markii dambena waxaan ka noqday Guddiga Sare ee Ururka Horumarinta Guriyeynta Beesha. Waxaan ka shaqeeyay Guriyeynta Dadweynaha ee adeegyada degganayaasha waxaanan shaqaale uga noqday Golaha Alaska ee Guri laawayaasha. Sannadkii 2013, waxaan u guuray Washington si aan u horumariyo qaybo badan oo guryo ah si aan ugu adeego dadka hoylaawayaasha ah. Waxaan rumeysanahay in khibradeyda adeegyada tooska ah ee dadka degan, maalgeliyaha adeegyada, iyo sidoo kale horumariyaha qeybaha loo qoondeeyey loona qaabeeyey inay hoy siiyaan dadka guri la’aanta ah, inay u keeneyso golaha aragti ballaadhan. Waxaan wakiil ka ahay Ururka Maamulayaasha Guriyeynta Washington.
Rajadayda xubin gole ahaan waxay tahay inaan abuurno liis ay ku qoran yihiin xalal feker ah oo dhammaystiran si loogu adeego dadka hoylaawayaasha ah. Waxaan rabaa in aan arko anaga oo kugula talinayna fursado guriyayn oo hufan oo aan wax u dhimeyn sharafta dadkan.
Lona Hammer, PHMAgaasimaha Fulinta, Hay'adda Guryeynta ee Kennewick
Arimaha la xiriira deganaansho la'aanta guryaha iyo saameynta hoy la'aantu waxay ahaayeen welwelka aan qabo sanado badan. Jacaylkaygu wuxuu ka imanayaa in ka badan soddon sano oo aan la shaqeynayay dadka ka badbaaday rabshadaha guriga. Wadada hoy la'aantoodu ma aha oo kaliya inay ka timaado baahida loo qabo in laga tago jawi nololeed oo xadgudub ah laakiin sidoo kale waxay ka timaaddaa arrimaha xasillooni darrada maaliyadeed, saameynta naxdinta leh, caqabadaha sharciga, xaaladda socdaalka, iyo takooridda-arrimo badan oo isku mid ah oo ay la kulmaan dhammaan dadka hoy la'aanta ah. Marka ikhtiyaarrada guryaha la awoodi karo iyo kuwa la kabo labadaba ay xaddidan yihiin, wareegyada rabshadaha iyo hoy la'aanta ayaa sii socon doonta. Waxaan la imid aqoon ballaadhan oo ku saabsan rabshadaha guriga iyo galmada iyo dhibaatooyinka soo gaara dadka ka badbaaday iyo carruurtooda.
Waxaan rajeynayaa inaan u keeno aqoontaan wada hadalada siyaasada SACH si baahida loo qabo ikhtiyaarrada guryaha la awoodi karo oo la kabo iyo habab ku saleysan jahwareer lagu taageerayo helitaanka iyo sii heynta guryaha ayaa la iftiimin karaa oo lagu dari karaa jawaabta gobolkeena ee hoy la'aanta.
Linda Olsen, Guddoomiye ku-xigeenIsbahaysiga Gobolka Washington ee Ka Soo Horjeeda Rabshadaha Qoyska
Kirsten Jewell, GuddoomiyeIsuduwaha Barnaamijka Guriyeynta iyo Guri la'aanta, Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Gobolka Kitsap
Danta aan u leeyahay codsashada SACH waxay ka timid doorka aan ka qaatay dadaalada Magaalada Spokane ee ku saabsan joojinta hoy la'aanta ku haysata beesheena. Aniga oo ah qof degan nolosha Spokane, waxaa sharaf ii ah in aan golaha u soo bandhigo aragtida magaaladeyda iyo gobolka Bariga Washington. Gobolkeenu wuxuu wajahayaa caqabado iyo fursado u gaar ah la shaqeynta asxaabteena iyo deriskeena oo la soo deristay hoy la aan si ay u gaaraan guri xasilloon oo xasilloon waxaanan u maleynayaa in arrimahan ay qiimo u leeyihiin SACH inay tixgeliso maaddaama ay horumarinayso talooyinkeeda siyaasadeed. Aniga oo matalaya dawlada hoose, aragtidaydu waa tan maalgeliyaha iyo nidaam uruuriyayaasha. Waxaan u arkaa maalgashiga guud ee istaraatiijiga ah inuu yahay wade wadashaqeyn wax ku ool ah oo udhaxeysa labada adeeg bixiye iyo sidoo kale nidaamyada daryeelka.
Rajadaydu waxay tahay in SACH ay sii wadi doonto ka faa'iideysiga aragtiyada kaladuwan si ay u bixiso talooyin siyaasadeed oo labadaba xoojinaya jawaabta isku-dhafan ee Gobolka Washington ee joojinta hoy la'aanta iyo u fidinta bulshada aaladaha iyo dabacsanaanta si jawaab celin leh looga jawaabayo ujeeddooyinkooda gaarka ah, ee deegaanka. Intaa waxaa sii dheer, waxaan rajeynayaa in SACH ay sii wadi doonto la-hawlgalka macno leh kooxaha kale ee heer-gobol ah si loo hubiyo in la waafajiyo dadaalkeenna nidaamyada kale ee saameeya hoy la'aanta.
Matt DavisKhabiirka Barnaamijka Hoy La'aanta Magaalada Spokane ee Waaxda Bulshada, Guryeynta, iyo Waaxda Adeegyada Aadanaha
Dukumentiyada SACH / ICH
Agenda SACH ICH Abriil 15, 2021
SACH Sharaxaad Shaqo (PDF)
Fariinta Qorshaha Gobolka ee ku socota sharci dejiyeyaasha gobolka Washington (PDF)
Warbixinta Hoyga Yar Yar 2017 (PDF)
Talooyinka Dib-u-bixinta ee Guddoomiyaha - 2018 (PDF)
SACH Waxbarashada Slide Deck 2019 (PDF)